ज्ञानको बिकासमा अनुमान र झुटको प्रयोग | सिमान्तMarginal ज्ञानको बिकासमा अनुमान र झुटको प्रयोग – सिमान्तMarginal
Posted on 8 Jun 2017 14 Jun 2017 by Jesi | INCOMESCO
झुट र अनुमानलाई प्रयोग गरिएका घटना प्रसस्त भेटिन्छन्। अनुमानलाई ज्ञानको उपज मानिन्छ। ज्ञान तथ्यहरुबाट बिकसित हुंदै जान्छ र प्राप्त ज्ञानमा आधारित रहेर धेरै अनुमानहरु प्रवाहित भइरहेका हुन्छन। अनुमान मुलत: झुट हो, यो कल्पनामा जन्मन्छ र अडिग रहेर आर्को ज्ञानका रुपमा परिणत हुन्छ। झुटका बारेमा गरिएका बिभिन्न व्याख्या अनुसार, मुलत: विध्यमान ज्ञानको संरचनालाई भत्काउन प्रयोग गरिने ज्ञानबाट निस्कको अनुमान नै झुट हो । प्रारंभिक अवस्थामा अनुमान गर्दै बिचार बाहिर आउँछ; त्यसमा ब्यक्ती अडिग रहन्छ, बिभिन्न कार्यक्रमको माध्यमबाट आफ्ना बिचारहरुलाई स्थापित गराउँदै लैजान्छ र आफ्नो नेत्रित्व पनि त्यसैमा स्थापित गराउँदै लगेको हुन्छ । बिचारलाई जती सर्वमान्य र सत्य प्रमाणित गर्न सक्यो ब्यक्तीत्व त्यतिनै सर्वमान्य र चिरस्थायी रहन सक्छ । जस्तै गुरुत्वाकर्षणको नियम न्यूटनको ज्ञानबाट अनुमानको रुपमा बाहिर आयो, उनले यसैमा अटल निर्णय गरे, आफ्न थप ज्ञानलाई त्यसैमा लगानी गर्दै गए, पछी सर्वत्र प्रमाणित भयो आहिले गुरुत्वाकर्षणको नियम भएर ज्ञानका रुपमा चर्चित छ, न्यूटन अमर छन ।
ज्ञान, अनुमान र झुट
काङ्रेसको मान्यता मुलत: बिपी कोइरालाको ज्ञानबाट प्रस्फुटन भएका अनुमानमा आधारित छ। लामो समय अडिग रहेर आफ्नो जीवनको उत्सर्गमा उनले यो बिचारलाइ एउटा सिद्धान्तको रुपमा स्थापित गरेका हुन। त्यो बिचार एउटा संस्था बनेको थियो। बिपी कोइरालाले राजतन्त्र नभएका देशहरुको राष्ट्रियता झन मजवुत छन भन्ने तथ्यलाई परै राखेर नेपालको राष्ट्रियता मजवुत रहन सक्ने आधारहरुमा राजसंथाको अनुमान लगाए र त्यसैप्रती अडिग रहेर नेतृत्व लिन सक्ने अबस्था बनाएका थिए । उनी भित्र बिकसित यो ज्ञान सिक्किम विलय, बंगलादेशको गठन र नेहरु र इन्धिरा गान्धी डक्ट्रेनको प्रतिकार स्वरुप आएको हो। सुरुमा अनुमानकै भरमा आएको बिचारलाइ कोइरालाले मान्यताको रुपमा स्थापित गर्न केही हिंसाको फोर्स पनि प्रयोग गरे, झुटहरुलाई नदेखिने गरी (डिसगाइज्ड लाइ) प्रयोग गरे । २०३६ सालको जनमत संग्रहको परिणामलाइ स्विकार्दा आफु एक्लै हुनु पर्दाको क्षणमा पनि बिपी कोइराला बिचलित भएनन बरु धेरै कष्ठकर जीवन बिताए, यसरी उनको बिचार मस्किएको थियो। बिपी कोइराला बिचारमा दृढ थिए, त्यो दृढता उनलाई ज्ञानले दिएको थियो। उनी यही बिचारका कारणले गर्दा स्थापित भए। उनका कथनहरुलाई घटना र परीणामहरुले पुष्ठी गर्दै लगेको छ। त्यसैले उनले गरेका अनुमानहरु मान्यताका रुपमा स्थापित हुँदै गए।
आ-आफ्ना अनुमान(झुट)हरुलाई खासगरी राजनीतिमा सत्य सावित गर्न बिभिन्न दवाव (फोर्स) को प्रयोग गरिन्छ। यस्तो फोर्स हिंसात्मक वा तथ्यांकमा आधारित जे पनि हुन सक्छन। झुटलाई सत्य सावित गर्न प्रयोग गरिएको रणनिती नै फोर्स हो। झुटलाई मिठा शब्द र भाषा (शब्दजाल) को प्रयोग गरेर स्वभाविक बनाउन खोजिन्छ। देखिने र नदेखिने गरी झुटको प्रयोग गरिएको हुन्छ। देखिने झुटलाई उदांगो र नदेखिनेलाई छिपेको (डिसगाइज्ड) झुट भन्ने गरिन्छ। यदि झुटो बोल्नु पर्ने आवश्यकता हो भने त्यो नदेखिने खालको हुनुपर्छ, भनिन्छ। नेपाली राजनीतिमा झुटलाई प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकताको उद्धेश्य- जनभावनामा धक्का दिनु हो; जसबाट स्थापित मान्यताहरुलाई विस्थापित गरेर रिक्त स्थानमा आफ्नो मान्यतालाई स्थापित गर्ने अभिष्ठ राखिएको पाईन्छ । झुट नियतवस अरुको अहित र आफ्नो हितमा प्रयोग गरिन्छ तर त्यस्तो अहितको सिकार भने आफै हुनुपर्ने अवस्था आउँछ। अनुमान(झुट)हरुलाई सत्य सावित गर्न नसक्दा निस्कने परिणाम भयंकर डरलाग्दो हुन्छ भनिएको छ।
झुटलाई मिठा शब्द र भाषा (शब्दजाल) को प्रयोग गरेर स्वभाविक बनाउन खोजिन्छ। यदि झुटो बोल्नु पर्ने आवश्यकता हो भने त्यो नदेखिने खालको हुनुपर्छ। झुटलाई प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकताको उद्धेश्य- जनभावनामा धक्का दिंदै स्थापित मान्यताहरुलाई विस्थापित गराएर रिक्त स्थानमा आफ्नो मान्यतालाई स्थापित गराउनु हो
रोय सोरेन्सनले इराकी अपदस्त राष्ट्रपती सद्धाम हुसेनको शासन शैली र त्यसप्रती जनताको विश्वाशलाई आधार मानेर ‘उदाङो झुट’का बारेमा लेखेका छन । इराकी जनतामा सद्धामप्रती ‘हिजो पनि ठीक गरे, भोलि पनि ठिकै गर्नेछन’ भन्ने विश्वास के हो भन्दा ‘पार्टी र उनी (सद्धाम) प्रतिको अटल विश्वासको परीणाम’ नै हो भन्ने जवाफ भेटियो । सम्वाददाताको हवाला दिंदै सोरेन्सन लेख्छन- सद्धामलाई आफुले ढाँटिरहेको कुरा थाहा थियो, उनलाई म झुट हो भन्ने पनि ज्ञान थियो । तर पनि झुटमा टल्केका सद्धामका कपालको तारिफ कहिलेसम्म हुन्छ !’ अर्थात- संधै केही गर्छु भनेर केही नगर्ने, बरु भएको संम्रचनालाई भत्काउन आफ्नो ज्ञानको दुरुपायोग गर्ने ब्यक्तिगत चरित्र र राजनीतिका तिनै असफल पात्र र प्रव्रित्तिलाइ नै नेता नेत्रित्व मानेर हिंडने लाचार समुहको नेपाली झुण्डले सद्धामको शासन अंशलाई प्रतिविम्वित गरेको छ । आदर्शको बखानो गरेर हजारौँ इमान्दार कार्यकर्तालाई ढाँटीरहेका नेपाली राजनीतिका धेरै जसो ‘नेता’हरुलाई पनि आफ्नो झुटबारे राम्रो ज्ञान छ ।
प्रयोग – दुरुपयोग
यहाँसम्म आइपुग्दा नेपाली कांग्रेसको मान्यतालाई उपयोगीतावादले संकटमा पार्‍यो। किनभने नेपाली माओवाद स्वयं अनुमानको प्रयोग थियो । त्यस झुटलाई सत्यमा परीणत गर्न सक्ने क्षमता नेतृत्वमा थिएन । किनभने उनिहरुले उठाएका कुराहरु धेरै जसो कुराहरु अव्यबहारिक थिए; यो ज्ञान थियो- कांग्रेसलाई। कांग्रेसले माओवादिहरुलाई हिंसामा जानु हुँदैन, संसदमै फर्कने हो भने हतियार उठाउनु हुन्न भन्ने कुराको मनोबैज्ञानिक हेक्का र त्रास सत्ता संचालनको विधिबाट समयमा दिन नसकेकै हो। यता माओवादमा माओवाद हरायो, बहुदलिय पद्धती भित्रियो। अहिलेको काँग्रेसमा बिपी बिचार छैन, जुन बैचारिक शक्तिले संगठन हिंडन सक्यो। अहिले हिजोका दुश्मनहरु साझा भएर चुनावमा तलमेल गरिरहेका छन, यो चरम उपयोगवाद हो। यसैलाई उनिहरु सैद्धान्तिका जितको जामा भिराएर आर्को झुट गरिरहेछन् । एमालेको पनि कुरै भएन- एमालेका झुटहरु पनि उदांगा छन। बैचारिक छाता च्यातिएकोले झन धेरै झुटका टालोहरु हाल्नु पर्ने अवस्था छ । अध्ययनहरुमा भनिएको पनि छ कि- एउटा झुट टाल्न धेरै झुटको प्रयोगले नेत्रित्व र संस्था नै झन असुरक्षित हुन थाल्दछ । संघिय गणतन्त्र आएमा नेपालले कायापलट गर्छ भनिएको थियो तर जनताले त्यस्तो महसुस गर्न र देख्न सकिरहेका छैनन । स्वयम बाबुरामहरुले आज आएर हिजोको झुट स्विकारीरहेका छन; पराजीत मासुस गर्दै छन। त्यसैले उनी अब अर्को झुटको लागि आफुलाई तयार गर्न खोज्दैछन, परीणामहरुले त्यस्तै देखाएकोछ। माओवादी आन्दोलनको रापमा हुर्किएको, जातिय उन्मुक्तिको नारालाई बाहुन छेत्री बिरुद्ध लक्षित पारीयो। यतीसम्म त ठिकै हुन सक्ला, तर रुवाण्डाको नरसंहार र भाषाको आडमा गठन भएको बङलादेशको अवस्थासम्म पुग्न दिनु दुर्भाग्य हुनेछ। ठुलो प्रजातान्त्रिक देश भारतले नेपालको गणतन्त्रको आदोलनलाई समर्थन गरेको भए पनि संबिधान सभाबाट निर्मित नेपालको संबिधानप्रती आफ्नो असहमती जनायो। त्यसलाई झुट सावित गर्नका लागि नाकावन्दिको फोर्स लगायो, संचार साधनको प्रयोग गर्यो । आफ्ना समर्थकहरुको परिचालन गर्‍यो। एउटा झुट टाल्न धेरै झुटहरु प्रयोग भए। स्वयं भारतीय राजदुत भन्दै थिए- नाकावन्दी लागेकै छैन। घटना र परीणामले त्यसलाई ठाडै अस्विकार गरिरहेका थिए।
प्रमाण – प्रमाणित
यथार्थमा, बिपीवाद भनेको पृथ्वीनारायण शाहको एकिकरणलाई गरिएको सम्मान पनि हो । दिल्लिमा भएको बाह्र बुँदे संझौताको परीणाम स्वरुप काङ्रेसको राजतन्त्र पराजित भयो र माओवादी आन्दोलनको पृष्ठभुमिमा सिके रावतहरु जन्मेका छन। यो नै विपी दर्शनको बैचारिक अन्तेष्ठि पनि हो। सिके रावतहरु जन्माउन दिल्लिको बाह्र बुँदे संझौताले धेरै हदसम्म काम गरेको छ। मधेशको नाममा सिके रावतहरुको जन्मले बिपिले उठाएका कुराहरु अरु सास्वत देखिएका छन । यदी गणतन्त्रका प्रवक्ताहरुले सिके रावतको झुटलाई बैचारिक रुपमा गलत प्रमाणित गर्न सकेनन भने परिस्थिती भयाबह हुन्छ । त्यसैले अहिलेको नेत्रित्वले आफ्ना बिचारलाइ मधेशको आकांक्षाको सम्बोधनमा केन्द्रित गर्न सक्नुपर्छ । झुटलाई आवश्यकता परे, नाबालकहरुको हितमा अविभाकहरुले गर्ने झुटझैँ, राष्ट्र र जनहितमा नदेखिने गरी प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ तर नदेखिने झुटको परिणाम पनि नराम्रो हुनेहुँदा त्यस तर्फ भने सचेत रहन जरुरी छ । त्यसैले मधेशिहरुमा नेपाल मेरो हो भन्ने भावना जगाउनु बाहेक अहिलेको नेत्रित्वसँग विकल्प छैन । उनिहरुमा जागेको ‘मेरो हो’ भन्ने भावनाले मात्र अबको राष्ट्रियता बलियो हुन्छ।
माथी उल्लेखित घटना र विवरणहरुले नेपालमा चरम झुटको खेती हुने गरेको देखाउँछ। स्थानिय निकायको निर्वाचनमा ल्याइएका घोषणापत्रहरु धेरै झुटले भरिएका छन। निस्चित ज्ञानको धरातलमा उब्जिएका अनुमानलाई पनि विद्वानहरुले झुटकै वर्गमा परिभाषित गरेका छन। नेपाली राजनीतिमा हुनै नसक्ने कुराहरु बोलेर राजनीतिको क्षणिक स्वार्थ लिने गरेको भए पनि छिट्टै त्यस्ता झुटहरु उदांगिएर ‘वल्लो घाट न पल्लो तिर’ भएका उदाहरणहरु धेरै छन। त्यतिमात्र होइन मुलुक र नागरिकहरुले भयानक कष्टको जीवन झेल्नु परेको छ। नेपाली जनताले बिकास बाहेक चाहेको केही होइन तर उनिहरु बिभिन्न बहानामा ढाटिने क्रम निरन्तर छ। केही हदमा झुट स्विकार्य भए पनि कालन्तरमा यसले अहित गर्छ। नेपालको नेतृत्वबाट- सैधान्तिक बिचलनको आरोपबाट जोगिन, अती उपयोगीतावादको ढाक छोप गर्न र सत्तामा बसेकाहरुलाई छिटो अपदस्त गर्न एक पछी आर्को झुटहरुको प्रयोग गरिएको छ। नेपालमा अहिलेको ज्ञान निर्माण प्रकृया स्ठुल नभएर ढुल्मुले अस्थिर तरल खालको छ। यस रिक्त अवधिमा अनुमानहरुलाई कसैले पनि अगाडी ल्याउन सक्ने हुँदा बिकास र नागरिक जनजिविकाको राजनीतिमा सहमति नखोज्ने हो र झुटको प्रयोगमात्रै गर्ने हो भने मुलुकको भबिश्य तिनै झुट बोल्नेहरुबाट समाप्त हुनेछ। मान्यतामा संकट आउनु अगावै नेतृत्वले समय अनुसार पारदर्शी रुपमा बैचारिक नेतृत्व दिन तयार हुनुपर्छ। त्यसकालागी उसमा काफी ज्ञान हुन जरुरी छ र त्यही ज्ञान र दृढ अठोटले उसलाई नेतृत्वमा स्थापित गराएको हुन्छ। अन्यथा आर्थिक गरिवी भन्दा बैचारिक गरिवी मुलुकका लागि भयानक डरलाग्दो हुनजानेछ।
Fallis, D., 2011. What liars can tell us about the knowledge norm of practical reasoning. The Southern Journal of Philosophy, 49(4), pp.347-367.
Powell, D., Horne, Z., Pinillos, N.Á. and Holyoak, K.J., 2015. A Bayesian framework for knowledge attribution: Evidence from semantic integration. Cognition, 139, pp.92-104.
Sorensen, R., 2007. BALD‐FACED LIES! LYING WITHOUT THE INTENT TO DECEIVE. Pacific Philosophical Quarterly, 88(2), pp.251-264.
Posted in बिकास, बी पी कोइराला, राजनीति, समाजवादTagged अखण्डता, नाकावन्दी, नेपालको राजनीति, प्रजातन्त्र र बिकास, बिचार बिश्लेशण, बी पी कोइराला1 Comment
Previous Postनेपालको भविश्य खण्ड वा अखण्ड; के मा छ ?Next Postतराइ आन्दोलन: झादेखी राउतसम्म
One thought on “ज्ञानको बिकासमा अनुमान र झुटको प्रयोग”
Pingback: तराइ आन्दोलन: झादेखी राउतसम्म – सिमान्तMarginal